ikhaya » iindaba » I-Pebble Beach Systems kwi-IBC 2017
I-Pebble Beach Systems kwi-IBC 2017
I-Weybridge, i-UK kunye ne-Broomfield, i-CO., E-USA, ngoJulayi 10th, i-2017 - Kwi-IBC 2017, kwi-8.B68, IiPlb Beach Beach Systems, I-automation ehamba phambili, ulawulo lwemixholo kunye neengcali zecandelo elihlangeneyo, liza kubonisa izixazululo zayo zakutshanje, kubandakanywa: ukuthunyelwa kweendlela ezininzi ezilungelelanisiweyo kubini kunye nefu langasese Orca; isibane solwandle, I-web based based management and tool monitoring izibuko leenqanawa namaphenyane okuzonwabisa Inkqubo yokuzenzekelayo; Kwaye yiti, Injini entsha yokuhamba, umphathi wokuqukethwe kunye nesisombululo sokwenza ividiyo.
I-Orca: Isitishi esivumelekileyo kwiBhokisi kwiZiko zikaRhulumente kunye namaPhandle
Abahlali be-IBC baya kubona ukuthunyelwa okuphilayo kunye nokusingathwa kweziteshi ezininzi kwindawo yoluntu okanye yangasese, usebenzisa Orca, Isisombululo sokwenza umdlalo olusungulwe phantsi kweMarga. Ukukwazi ukuhambisa izitsha ezintsha kumcimbi wemizuzu ngeendleko eziphantsi kwenza i-Pebble's cloud cloud isisombululo ngokukhethekileyo ukulungelelanisa iziteshi, izistim ezisekelwe kumcimbi, izicelo zokubuyiswa kweNtlekele, kunye nawuphi na umzekelo apho kufuneka khona amandla okuthunyelwa.
I-DMC, isango leendaba le-Yurophu, lisandul 'ukuzazisa ukuveliswa kwayo kwipulatifomu yokudlala eyakhayo epheleleyo ye-IP, esekelwe kwi-Pebble's Orca system. I-DMC ye-software echazwe ngokucacileyo-ye-'afi yosabalalisa yangasese 'inikezela utshintsho-nyathelo kumashishini olutsha kwaye lwenza abathengi bayo bazuze kwi-agility kunye nokuguquguquka kwehlabathi lonke le-IP.
Abanjwe kwi-DMC yokucwangciswa kwemisebenzi yenethiwekhi, ukuphathwa kweendaba kunye nokuhambisa indawo e-Amsterdam, iqonga linika abanikazi bomxholo bamazwe ngamazwe ngepasipoti kwi-700 yezigidi zabantu baseYurophu. Isiqonga, esilungiselela iziteshi ze-30 namhlanje, siya kusetyenziswa ngaphezu kwee-80 izithuthi eYurophu ukususela ngoSeptemba 1, i-2017, emva kokufudukela ngokupheleleyo kweziteshi ezisuka kwi-DMC yangaphambili. Ukwakhiwa kwe-IP konke kwenza i-DMC ikwazi ukumisela nokuhambisa iziteshi ezintsha ukuthengisa ngokukhawuleza kunanini ngaphambili 'umcimbi weeyure endaweni yeeveki' kunye nokukwazi ukunciphisa le mizuzu
Ngokuqwalaselwa kombono waloovulindlela kunye nobuchule bezobuchwepheshe, iDMC kunye nabalingani bayo bezobuchwepheshe baye bachongwa ngokukhawuleza kwi-IBC Innovation Award kwiCandelo loLwazi lokuSasazwa. Ophumeleleyo kwinqanaba liya kuziswa ngeCawa, ngoSeptemba 17th kwi-18: I-30 CET kwi-Auditorium ye-RAI.
Ukubeka iliso kunye nokuPhathwa kweMarine Automation, ngoku ngoku ngeZitsha zoKwakha kunye neZiko lokuSebenza
isibane solwandle Yinkxaso-mboleko ye-intanethi kunye nokubeka iliso kwideshibhodi izibuko leenqanawa namaphenyane okuzonwabisa Indawo yokuzenzekelayo eyenza ukuba iMarina isebenze kubasebenzisi bezentengiselwano, abasebenzi basebenzi kunye neenjineli ngaphakathi nangaphandle kweziko lo sasazo. Njengoko iphothifoliyo yomkhiwane we-Pebble iyanda kwilizwe elithengileyo, i-Lighthouse inikeza uluhlu lwezinto ezidibeneyo ezihambisa ukulungiswa kunye nokusebenza kwamashishini kwi-Orca virtual channels. Ukusebenzisa izixhobo ezintsha zokuyila kunye nokuthunyelwa, abasebenzisi be-Lighthouse bangakwazi ukuyila ngokukhawuleza, bahlele, baqalise, baqalise kunye nokuphulukana neendlela ezibonakalayo ze-IP kwi-fly.
Inika ukulawula, ukubeka esweni, ukuphathwa kweendaba, kunye nezixhobo zokuqulunqa izixhobo ngokusebenzisa uluhlu lweejethi kwiiboardshiards ezixhomekeke kwiwebhu, ngokukwazi ukuhlanganisa idatha kwiindawo ezininzi.
Imisebenzi yokudlala yangoku ifuna i-agile, iindlela zokuphendula kunye nantoni na imini. I-Lighthouse ifikelela ekufikeleleni kwabasebenzi nge-interfaces ye-browser egciniweyo ukwenzela ukuba isimo kunye nezenzo zokulungisa ziphezu kwemizuzwana nje, ngaphandle kwegumbi lokulawula. Kubasebenzisi abanamalungelo okulawula, ukufikelela nokulawula itya ukusuka kuyo nayiphi na indawo kunye neLowhouse yenza umsebenzi ongenakulindelwa ukhuselekile, kwaye ungakhathazeki ngabasebenzi abaphezulu.
Ukuphuhliswa ngokubambisana kunye Blue Lucy, yiti Injini entsha yokuhamba komsebenzi, ukuphathwa kokuqukethwe kunye nesisombululo sokucoca ngevidiyo esidibanisa ngokusondeleyo nePebble's Marina system. Inika ukunikezelwa kwefayile ejoliswe kuyo, ukulungiswa komxholo, kunye nemigangatho yokusebenza yase-QC ngaphandle kwemfuneko yokuhambisa isisombululo se-MAM ye-enterprise.
Indlela yokulawula umxholo weBelga igxile kwimisebenzi yokulungiselela umxholo wokudlala nokusabalalisa. Ukuhlolisisa isigaba, umxholo womxholo, ukuvumela ukulungelelanisa ukuhlela, ukwenza i-QC epheleleyo kunye nokuvelisa iingxelo zonke iindlela ezifunekayo kunye nombhobho wokudlala. I-Beluga iphinda idibanise ukudalwa kwezinto zokuhamba kunye neproxy kwi-toolset ekhoyo. Njengoko inani labasebenzisi likhula, i-interface ye-web-based ye-web-based elula yenza ukuba amaqela asebenzisane namajelo ngaphandle kokufakela isofthiwe yabaxhasi abazinikeleyo.
Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli CES2017 Inkqubo yoLawulo Injini yeVidiyo	2017-07-10
Previous: I-axle iVidiyo iphakamisa ukusebenza kunye nokungahambi kakuhle kwe-Bar MAM Solutions
next: I-Soundly Streamlines i-SFX Workflows kwi-Storyline Studios
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "I-Pebble Beach Systems kwi-IBC 2017". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/pebble-beach-systems-at-ibc-2017/. Enkosi.